Rudzi: Desserts, Sweets, Baking
MuDenmark, munhu wese ane shungu yekubheka. Kunyangwe paine rudo rwemapai uye muffin, kune vashoma vanhu vakafutisa pakati pevaDanes. Kutanga, mararamiro ane hutano anoonekwa mukuremekedzwa kukuru. Kechipiri, yakanakisa ecology. Chechitatu,…
MuAzerbaijan, shakerbura inotapira keke inoshandiswa neiyi. Muchokwadi, aya ndiwo mapaipi akaumbwa sekirisendi. Izvo zvakagadzirirwa kubva kune crumbly waffle hlama. Isa yakaoma (isina kunyorova!) Kuzadza mukati kubva ...
Kuita kuti hupenyu hutapire mugore Idzva 2019, uye hapana nzvimbo yekuvavira mariri, tichagadzirira akawanda anonaka madhiri ekuzororo. Maswiti ekuzvigadzirira, jellies, makuki uye, zvechokwadi, makeke akaomeswa ...
Yezve tafura yegore Idzva 2019: Honey Nguruve makuki - iyo nzira yacho yakanyanya kunaka!
Sezvo gore reNyika Nguruve iri kuswedera, wedzera dhayeti yakaita yenguruve patafura yemhemberero. Inogona kunge iri saradi kana payi, uye tinokukurudzira kuti ubike cookie yakadaro inosekesa - ...
Gadzira zvinonaka zvekugadzira ice cream. Iyo nyoro, inotsvedzerera, velvety - uchave mugumo wakanaka kumutambo weGore Idzva. Homemade ice cream ine inonaka kuravira, sezvo iyo yakagadzirirwa kubva kune zvakasikwa zvigadzirwa. Tinogona kutaura zvakachengeteka ...
Mugore Idzva 2019, panofanira kunge paine madhishi aunofarira patafura: mapakeji ane michero, michero uye kottage chizi, oatmeal kana gingerbread makuki, zviwitsi zvakagadzirwa kubva kumichero yakaomeswa uye nzungu, ice cream yakagadzirwa pamba. Kana keke iri ...
Ndiudze imwe nzira yakapusa yemafuta makobvu mune yesimbi! pane webhusaiti pirogblog. com tarisa, kune kazhinji mapepeti etsika dzehupfu 175 g munyu 1/2 tsp. shuga 2 tbsp. l. ...
Ungamonera sei bhisikiti mumupumburu kuitira kuti irege kutyora? unofanirwa kuumbundira uchidziya. soak and make one wet and on solid cellophane, putika kana bhisikiti ranyorovera, unofanirwa kuita kuti rionda ...
Nzira yekugadzira chokoreti muto? Chokoreti inovava (yakagurwa) - 250 g Mazai emazai - 4 pcs. Shuga - 4 tbsp. l. Kurova kirimu - 2 makapu Vanilla mushoma - 1 ...
Nei mazai akabikwa achibatsira? Iyo yolk ine chimwe chinhu, ini ndakakanganwa, chehuropi, lecithin kana chimwe chinhu, uye puroteni iri 100% mapuroteni.Mazai anobatsira kudzivirira kukura kwekenza yemazamu. Izvi zvimiro zvemazai zvinoratidza ...
vanoda mushonga. charlottes muChirungu neshanduro, hazvo, pamwe vakamupa Apple Keke 6 mashupuni bhotoro, tembiricha yemukati, pamwe nekuwedzera kwekuzora ndiro 1-2 maapuro, ...
nzira yakanaka yekubheka chingwa chitema mukugadzira chingwa. Tarisa mhinduro dzangu uye pikicha album "Chingwa Changu" Bread Rye chirongwa RYE (maawa matatu nemaminitsi makumi matatu). Bundu rinosanganisa notched banga rinoshandiswa) Mbiriso 3 ...
Nzira yekugadzirira sei bundu neSaf Moment yakaoma mbiriso?
Nzira yekugadzirira sei bundu neSaf Moment yakaoma mbiriso? Kanganwa nezvembiriso yakaoma zvachose kana iwe uchida kuwana chaiwo mapai. Iwe haugone kuwana iko kuravira kunorarama mbiriso inopa ...
ndiudze zvaunogona kubheka kubva yogati. ndokumbira undiudze zvaunogona kubheka kubva kugati! thanks pie, ingo wedzera hupfu, shuga, soda uye chero kuzadza. zvichava zvinonaka. unogona kubheka kottage chizi kubva mukaka wakakora ....
Ndokumbira unditaurire mabikirwo echingwa cheBorodino chaunogona kubika mukugadzira chingwa. Ini ndinobika iyi Rye custard 40g. gadzira chimera 80ml kufashaira mbiriso yemvura 14g. chakatsikirirwa furawa yegorosi 225g rye 325g. 1h ...
Chii chaungaite chekudya chegirinhi kumba? kabati tsvuku kabichi, svina muto + akati wandei madonhwe esvinu / vhiniga, ndimu / haizove yakasvibira, asi mimvuri yebhuruu ...
Iwe unogona sei kushongedza zvakanaka "Napoleon" kumba?
Iwe unogona sei kushongedza zvakanaka "Napoleon" kumba? Dzvinya maruva kubva pakuchengetwa nesirinji, kusasa nechokoreti yakakangwa kana coconut. Kazhinji, ndakaona zvishongedzo kubva zvinodyiwa zvinotengeswa mu confectionery ...
Chii chinogona kugadzirwa kubva semolina, kunze kweporridge, ndeapi mabikirwo aripo? Ndine nzira yakadaro yemana, pikicha mo: Hove: 2 magirazi e semolina 0,5 l wekefir 1, tsp. l kubheka hupfu 1 girazi reshuga ...
Mibvunzo ye56 mu database yakagadzirwa mu 0,460 masekondi.